WHO & IATA: 3rd Wave yeCOVID yekupararira nekukurumidza, ichirova Africa zvakanyanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Eswatini Breaking News » WHO & IATA: 3rd Wave yeCOVID yekupararira nekukurumidza, ichirova Africa zvakanyanya
African Tourism Bhodhi • Airlines • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Eswatini Breaking News • France Kuputsa Nhau • Health News • Investments • nhau • vanhu • chengetedzo • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
IATA Kufamba Pass kuitisa miedzo
Aviation uye Tourism ndiyo inonyanya kuwana mari uye nzira yehupenyu kuAfrica Nyika. IATA neWorld Health Organisation vataura nevatori venhau nhasi pane fungidziro inotyisa. IATA inoda kuti yayo IATA ipfuure kuitiswa pasirese kudzivirira kunyange yakanyanya kurasikirwa.
Yakawanda sei mukana iyo African avhiyesheni uye yekushanya inofanirwa kugadzirisazve indasitiri yendege uye yekufambisa?
Wave wechitatu wehutachiona hwe COVID-19 inotarisirwa kurova Africa zvakanyanya uye inogona kukonzera kukuvara kwakawanda, sekuyambira kwayakaitwa neWorld Health Organisation (WHO).
African Tourism Board uye World Tourism Network iri kuombera IATA uye iri kuda kubatana, kutaurirana, uye kunyatso tsvagiriswa kuita chivimbiso chenguva yemberi yeinokosha yekufambisa neyekushanya indasitiri mukondinendi.
Yakanyanya sei chirango inogona kutorwa neAfrican Aviation indasitiri?
Iyi nyaya uye fungidziro inotyisa neWorld Health Organisation yaive nyaya yemanhasi akabatana neIATA WHO musangano wekudhinda muParis.
COVID-19 yakakonzera mabhiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica mukurasikirwa uye akaisa mamirioni manomwe emabasa akarasika kuKondinendi yeAfrica. Ndege 7 muAfrica dzaifanirwa kunyorera kubhuroka. Pasi rose kubhururuka kwakatora a 413 mabhiriyoni kurasikirwa. Sekureva kweIATA hutsva mubhizinesi hautarisirwe kusvika muna 2024.
Enda kune rinotevera peji kuti uverenge zvese >>